Garden nomhlobiso ngezandla zakho siqu
Noma yimuphi umuntu has a iphupho. Ezinye ufuna ukuya phesheya, abanye - ukuthenga imoto. Futhi ngiphupha ukuze ujike smallholding yakhe epharadesi encane. Kuyo, ungakwazi ukukhohlwa zonke izinkathazo nosizi, ukujabulela ubuhle izimbali futhi nephunga utshani. Garden nomhlobiso ngezandla wakho ekunika ukuzwakalisa ukuba umcabango futhi ivumela ukusetshenziswa izinsalela a izinto zokwakha.
Izinto ezingalindelekile ukuthola ukusetshenziswa entsha. Nasi iketela ubudala yaphenduka yasekuqaleni flower embhedeni, kanye steel ubudala imiganu izigqoko amakhowe otshanini. Uma une ucezu lwakho siqu izindawo ezingakhiwe, kodwa kubukeka buthuntu futhi akuthandeki, I asikisela ukuba sicabangele ongakhetha ahlukahlukene kanjani ukuhlobisa ingadi ngezandla zakhe.
Siqala uhambo lwethu ne ucingo futhi isango. Ukuze ufihle emehlweni prying, futhi inciphise uthuli umsindo engadini, akudingekile ukufaka abayizithulu futhi kocingo oluphakeme. Enough ukutshala uthango, uyisebenzisa njengoba siluhlaza nezitshalo eziqhakazayo. Bush sizobonisa hhayi kuphela indawo esemngceleni, kodwa futhi ukwabelana isikhala yayo ezindaweni kudingekile, imaski isakhiwo kwezomnotho bese udala emakhoneni umthunzi uphumule.
engadini ngezandla zakhe Ukuhlobisa ngempela kuhilela ilungiselelo zamathrekhi ukhululekile. Izinsalela isitini noma tile, isihlabathi noma amagxolo imibengo kukhona esiphelele. Ungathenga ifomu ekhethekile futhi ulisebenzise ukukhiqiza amathayili okwenyanga, bathele isixazululo ukulungele endaweni.
Ukuze abhubhise labo abangenandaba nakho ekwakheni, mina ukweluleka uthele izindlela ngohlalwane. Lokhu kuyinto elula kakhulu futhi fast. Ngaphandle kwale moto, kudingeka izinsalela ubudala ifilimu noma ukufulela impahla. Badinga ukubekwa phansi ukuvimbela ukukhula ukhula track. Ukusebenzisa ucingo amabhodi, akhiwe ngezitini noma ngamatshe yemvelo. Kakhulu ukubukeka enhle engonxantathu amathrekhi, enika ikhubalo ekhethekile kusayithi.
Ungakhohlwa izimbali - ingadi umhlobiso okukhulu. Izandla zakhe babeka yezimbali eduze amathrekhi, uzinameke inhlabathi izakhi kanye isitshalo izithombo okulungiselelwe. Olwandulelayo kubalulekile ukukhetha izitshalo ezokwenza eziqhakaza ngezikhathi ezahlukahlukene, embhedeni wakho ujabule mayelana lonke isizini ihlobo.
Isinyathelo esilandelayo kuyoba umgwaqo luminaires, okuzokwenza lo nangezindlela ebumnyameni. Udinga banakekele ukukhanyisa bawuphithanisile umkhondo wezindlela nezinyathelo. Beka zalapho ezimbalwa flowerbeds nasemaceleni ichibi lokwenziwa. Kwanele hang elihle lezimbali izimvemvane akhazimula ehlathini ukuze beze esivandeni sakho ishintsha. Garden nomhlobiso ngezandla zakho ngosizo ukukhanyisa imiphumela - nakho okuthakazelisayo kakhulu. Ngokushintsha isiqondiso ugongolo, noma ezihambayo isibani kwenye indawo, wena kungamshintsha isayithi.
Lapho kocingo, izindlela, zezimbali nokukhanya eseqedile, ungakwazi ukuhlela ezihlukahlukene izibalo zokuhlobisa. Modern izikhungo engadini kanye imbali izitolo zinikeza anhlobonhlobo ukubaza futhi izibalo ezincane kakhulu emkhakheni wezolimo. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga konke okudingayo. Kodwa okuthakazelisa kakhulu ukwenza umhlobiso for engadini ngezandla zakhe.
Uma une indawo kube khona isiphunzi futhi ucabanga, indlela ayibulale, bese usivule embhedeni noma ukwenza yesikhulumi ukuze izingwejeje zokuhlobisa. Umhlambi izinyoni kule ndawo uyobheka kungekho muhle kangako.
Ukuphupha ihlobo iholide, kodwa awukwazi bathathe uhambo? Khetha ukuba baphumule indawo encane, alisibekele isihlabathi. Setha Chaise longue, futhi iseduze kukhona izihlahla zesundu ezinengi kusuka amabhodlela epulasitiki. Uma inombolo nge platform ezinjalo ngeke akhiwe ichibi lokwenziwa, ngisho usayizi encane, futhi kusihlwa, kuyothiwa lezimbali elikhanyayo, uzoba umnikazi uyaziqhenya ucezu sakhe encane eseduze nogu.
Garland LED izandla siqu: inganekwane noma zingenzeka ngempela?
Senza embhedeni: inhloko ngezandla zakhe
Ukususa amabala kuzo zonke izinhlobo izindwangu
Kuqondile Welding ngoba amabhethri ngezandla zabo: imiyalelo
Amazinyo angayendayenda ungathanda ukuqinisa? "Maraslavin" - ukubuyekezwa. Imithi elwa namagciwane ngoba parodontosis
Isikhathi sokunciphisa ukuthengiswa kwezindlu zangempela. I-Civil Code ye-Russian Federation
Izidakamizwa "rumalon" Iziyalezo yokusetshenziswa
Kungani ngidinga amantombazane ubhodisi?
Richard Griffiths: Filmography, biography, izithombe
Umlingisi owaziwayo u-Dolinsky Vladimir Abramovich: biography, impilo yomuntu kanye nefilimu
Rafael Van Der Vaart: Biography emfushane